> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos & Videos ka Phones HTC EVO 3D
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray photos & videos ka 3D HTC EVO
Photos, video, ama muusikada ku shubtaan taleefanadooda HTC EVO 3D lagu lumin karaan tirtiro, formatting, weeraro virus iyo arrimo kale oo badan. Marka ay tani dhacdo, ha ka welwelin. Dhab ahaantii, kuwa sawirada, video clips, heeso iyo waraaqaha la soo kabsaday karaa inta ay tahay in aan la overwritten by xog cusub oo ku saabsan HTC EVO 3D. Tani waxay suuragal in la sameeyo dib u soo kabashada file u HTC EVO 3D la barnaamij soo kabashada HTC EVO 3D.
Waxaad isku dayi kartaa Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac . Kabashada sawir Arintan waxay u sahlaysaa in aad ka bogsato oo dhan photos, videos iyo files audio ka HTC EVO 3D, iyadoo aan loo eegayn aad tirtiray, formatted ama iyaga laga badiyay sababo kale.
Isku day version maxkamad free of barnaamijkan soo kabashada HTC EVO 3D hadda oo soo bixi version saxda ah ee computer hoos ku qoran.
Qabtaan HTC EVO 3D Recovery in 3 Talaabooyinka
Next, aynu qaadan version Windows barnaamijka sida isku day ah.
Step1. Ku rakib oo ay maamulaan barnaamijka HTC EVO 3D
Marka hore, soo dajiyo oo ay maamulaan barnaamijka on your computer, oo waxaad heli doontaa interface hoose. Markaas xirmaan telefoonka HTC EVO 3D in kombiyuutarka la cable USB ah ama adigoo kaarka SD ee kaararka aqrisa SD ah. Kaliya dooro sida aad jeceshahay. Markaas riix "Start" badhanka si ay u bilaabaan soo kabashada file u phone HTC EVO 3D.
Step2. Dooro HTC EVO 3D in iskaan
Halkan kaliya u baahan tahay in aad dooratid in aad telefoonka HTC EVO 3D oo uu bilaabo inuu iskaan tirtiray videos, sawiro iyo music.
Haddii aad rabto oo kaliya si aad u hesho file ah oo cayiman dib uga telefoonka ku qor, waxaad sameyn kartaa nooca faylka ama qaab adigoo isticmaalaya "Filter Options".
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta HTC EVO 3D
Marka scan ka baxayo, aad mid mid ku eegaan kartaa sawirada. Sida video iyo maqal ah, waxaad u baahan tahay inuu ka soo kabsado iyagu marka hore, ka dibna ciyaaro si uu u hubiyo tayada.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday ah ee aad taleefan HTC EVO 3D. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial soo kabashada HTC EVO 3D
Waa maxay sababta aad soo kaban karto, Photos tirtiray ka 3D HTC EVO
Marka aad tirtirto images, videos ama faylasha kale off card SD ah, faylasha tirtiray weli waxaa jira, oo kaliya kaydinta waxay la calaamadeeyey sida maran u qori. Waxay kale oo ay si dhab ah uma weligiis tageen. Sidaas xusuusan waayay inuu u toogtaan sawiro ama videos aad HTC EVO 3D marka aad ogaaday in aad laga badiyay faylasha aad, sababtoo ah mar ah "qori" dhacaya, inay adag tahay in ay si buuxda u bogsadaan oo dhan files.
Fiiro gaar ah: Marka aad ka heli files ka phone HTC EVO 3D iyo qorsheeyo si ay u soo kabsadaan ka dib, xasuuso inaad badbaadin natiijada iskaanka soo-celinta daahay, si looga hortago in xogta laga badiyay.